XOG DAHSOON: Alshabaab Oo doonaya In Ay soo Celiyaan Boqortooyo Horay U jiri Jirtay#aqriso magaca+sababta | Xaqiiqonews
XOG DAHSOON: Alshabaab Oo doonaya In Ay soo Celiyaan Boqortooyo Horay U jiri Jirtay#aqriso magaca+sababta
Xaflad ka dhacday degmada bu,aale ee gobolka jubada dhexe ayaa wax ay alshabaab soo bandhigeen dhalin yarro badan oo ka soo jeeda beesha Ajuuraan.
Xafladdan oo aheyd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa dhanka alshabaab ugu soo qeyb galay sheikh fu,aad maxamed khalaf, nin kale oo magaciisa lagu sheegay sheikh cabdulaahi macalin geedow iyo wadaad kale oo magaciisa lagu soo gaabiyey sheikh cabdiraxmaan firin.
dhanka kale waxaa goobta lagu casuumay nabaddoono ka soo jeeda beesha ajuuraan oo iyaga goobta hadalo ka jeediyey.
Dhalinyarrada la soo bandhigay ayaa la sheegay in ay ka soo qalin jebiyeen machad xarakadu ay leedahay iyagoo si qoto dheer u fahmay mabaa,dida xarakada sida goobta laga sheegay.
waa markii ugu horreysay ee dhalinyarro intaan la eg oo beesha ujuuraan ka soo jeeda loo diyaariyo qaab noocan ah waxaana warar hoose oo shabakadda xaqiiqonews ay heshay ay sheegayaann in dhalinyarradan ay barteen tababarada fudud sida qoryaha fudud loo rido oo kale balse lama oga tilaabada tan xigta iyo qaabka ay u howlgali doonaan.
Beesha Ajuuraan waa beel ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee ka baxay saaxadda siyaasadda waxa ayna horay ajuuraan u heysteen boqortooyadii ajuuraan ee bur burtay .
si kastabe ha ahaate alshabaab ayaa doonaya in tayeeyaan beesha ajuuraan oo ka mid ah beelaha dega Jubbada dhexe oo ah gobolka galiya ee hadda Alshabaab ay gabi ahaanba maamuulaan.